Kukwidza cheni fekitori, Vatengesi - China kusimudza cheni Vagadziri
Grade 80 (G80) inosimudza ngetani
SCIC Giredhi 80 (G80) maketani ekusimudza anoitwa seese EN 818-2 zviyero, ine nickel chromium molybdenum manganese alloy simbi paDIN 17115 zviyero; yakagadzirirwa zvakanaka / kuongororwa kuwelding & kupisa-kurapwa simbisa macheni emakemikari zvivakwa zvinosanganisira bvunzo simba, kutyora simba, kukwirisa & kuomarara.
Bhuku 100 (G100) rinosimudza ngetani
Kusimudza uye kupwanya, cheni, pfupi yekubatanidza cheni, kutenderera chinongedzo cheni kusimudza, Giredhi 100 cheni, G100 cheni, cheni chipfuramabwe, chipfuramabwe cheni, ASTM A973 / A973M-21 yakatarwa standard yeGrade 100 chiwanikwa simbi cheni
Giredhi 100 (G100) ketani zvidhindo
SCIC giredhi 100 (G100) cheni zvimorero (pa EN 818-4) inotora yega yakaitwa giredhi 100 (G100) cheni uye fittings kubva kune vakasarudzwa zvakanaka vagadziri vanoita zvakanyanya kuomesesa kuongorora, kuyedza uye zviitiso maitiro; pamusoro pezvo, SCIC injinjini inoita saiti chipupuriro uye kutonga kwehunhu pazvinhu zvese zvakagadzirwa musati maburitswa pakuendeswa kuSICIC fekitori fekitori yekugadzira chipfuramabwe uye musangano.
SCIC giredhi 80 (G80) cheni zvimorero (pa EN 818-4) inotora yega yakaitwa giredhi 80 (G80) cheni uye fittings kubva kune vakasarudzwa zvakanaka vagadziri vanoita zvakanyanya kuomesesa kuongorora, kuyedza uye zviitiso maitiro; pamusoro pezvo, SCIC injinjini inoita saiti chipupuriro uye kutonga kwehunhu pazvinhu zvese zvakagadzirwa musati maburitswa pakuendeswa kuSICIC fekitori fekitori yekugadzira chipfuramabwe uye musangano.